ရုပ်ရှင် လောကကြီးက မြင့်မြတ် ဘက်မှာ ရှိနေလို့ မြင့်မြတ်ကို မထိဖို့ သတိပေး လာခဲ့တဲ့ ဇော်ဇော်အောင်.. – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on December 22, 2020 Author admin	Comments Off on ရုပ်ရှင် လောကကြီးက မြင့်မြတ် ဘက်မှာ ရှိနေလို့ မြင့်မြတ်ကို မထိဖို့ သတိပေး လာခဲ့တဲ့ ဇော်ဇော်အောင်..
မနေ့ကနဲ့ ဒီကနေ့မှာ ပရိသတ် တွေကြား သတင်းကြီး နေတာကတော့ နိုင်ငံကျော် မင်းသားကြီး ဖြစ်တဲ့.. အကယ်ဒမီ မြင့်မြတ်ရဲ့ ဖခင်ကိုယ်တိုင် ဖြေကြားခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူး ဗီဒီယိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်..
မြင့်မြတ်ရဲ့ ဖခင် ကိုယ်တိုင် ပြောကြားခဲ့တဲ့ စကားတွေက ပရိသတ် တွေကို အထင်အမြင်.. လွဲမှားသွား စေခဲ့တာကြောင့် တချို့သောပရိသတ် တွေက မြင့်မြတ်ကို ဝေဖန်နေ ကြသလို တချို့ကလည်း မြင့်မြတ်ရဲ့ စိတ်ရင်းကို သိနေတာကြောင့် ဒီကိစ္စက မိသားစုချင်း နားလည်မှု လွဲနေတယ်လို့ ပြောနေ ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..
နိုင်ငံကျော် မင်းသား မြင့်မြတ် ကိုယ်တိုင်ကတော့ သူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ဘာကိုမှ ပြန်လည်.. ဖြေကြားခြင်း မရှိပေမယ့် မြင့်မြတ်ကိုချစ်ကြတဲ့ နီးစပ်ရာ အသိုင်း အဝိုင်းကတော့ မြင့်မြတ်ရဲ့ စိတ်နေ သဘောထားကို ပြောပြ နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်.
အထူး သဖြင့် မြင့်မြတ်နဲ့ အနီးကပ် အလုပ်တွေ လုပ်ကြတဲ့ အနုပညာ အသိုင်း အဝိုင်းက မြင့်မြတ်ရဲ့.. အကြောင်း တွေကို ပြောပြ ကြပြီး နိုင်ငံကျော် ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဇော်ဇော်အောင် ကလည်း သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာ မျက်နှာကနေ အခုလိုပဲ ပြောလာ ပါတယ်..
ဇော်ဇော် အောင်ကတော့ ” မြင့်မြတ် အကြောင်းမသိပဲ မထိနဲ့ ရုပ်ရှင် တစ်လော.. ကလုံး မြင့်မြတ် ဘက်မှာရှိတယ် ” ဟုဆိုပြီး မြင့်မြတ်ရဲ့ အတွင်း ရေးကို သေသေချာ ချာမသိပဲ သွားပုပ် လေလွင့် မပြောဖို့ ပြောလာခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..
ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင် မင်းသား ဇော်ဇော်အောင် ပြောသလိုပဲ မြင့်မြတ် ကတော့ အနုပညာ တစ်လောက.. လုံးသာမက ပရိသတ် တွေရဲ့အားပေး ဝန်းရံမှုကို ရရှိထား တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..
Source: Zawzaw Aung’s fb
မနေ့ကနဲ့ ဒီကနေ့မှာ ပရိသတ် တွေကြား သတင်းကြီး နေတာ ကတော့ နိုင်ငံကျော် မင်းသားကြီး ဖြစ်တဲ့.. အကယ်ဒမီ မြင့်မြတ်ရဲ့ ဖခင်ကိုယ်တိုင် ဖြေကြားခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူး ဗီဒီယိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်..
မြင့်မြတ်ရဲ့ ဖခင်ကိုယ်တိုင် ပြောကြားခဲ့တဲ့ စကားတွေက ပရိသတ် တွေကို အထင်အမြင်.. လွဲမှားသွား စေခဲ့တာကြောင့် တချို့သောပရိသတ် တွေက မြင့်မြတ်ကို ဝေဖန်နေ ကြသလို.. တချို့ကလည်း မြင့်မြတ်ရဲ့ စိတ်ရင်းကို သိနေတာကြောင့် ဒီကိစ္စက မိသားစုချင်း နားလည်မှု လွဲနေတယ်လို့ ပြောနေ ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..
နိုင်ငံကျော် မင်းသား မြင့်မြတ် ကိုယ်တိုင် ကတော့ သူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ဘာကိုမှ ပြန်လည်.. ဖြေကြားခြင်း မရှိပေမယ့် မြင့်မြတ်ကိုချစ်ကြတဲ့ နီးစပ်ရာ အသိုင်း အဝိုင်းကတော့ မြင့်မြတ်ရဲ့ စိတ်နေ သဘော ထားကို ပြောပြ နေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..
အထူးသဖြင့် မြင့်မြတ်နဲ့ အနီးကပ် အလုပ်တွေ လုပ်ကြတဲ့ အနုပညာ အသိုင်း အဝိုင်းက.. မြင့်မြတ်ရဲ့ အကြောင်း တွေကို ပြောပြ ကြပြီး နိုင်ငံကျော် ဇာတ်ပို့ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဇော်ဇော်အောင် ကလည်း သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာ မျက်နှာကနေ အခုလိုပဲ ပြောလာ ပါတယ်..
ဟာသသရုပ်​ဆောင်ဦးဧရာ Covid ရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန် သွားပြီ
ဟာသသရုပ်​ဆောင်ဦးဧရာ Covid ရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန် သွားပြီ နိုဝင်ဘာ၃၀ ရက်က Covid-19 Positive ဖြင့် ရန်ကုန်​ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရသူ ဟာသလူရွှင်တော်နှင့်သရုပ် ဆောင်ကြီးဦးဧရာသည် ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ရက်​ယနေ့ မနက် ၃နာရီ ၃၉ မိနစ်တွင် ဆေးကုသမှုခံယူရင်းကွယ်လွန် သွားပြီဟုသိရသည်။ ဦးဧရာသည်ရောဂါအခံများ ကြောင့်ကိုဗစ်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းမရှိဘဲကွယ်လွန်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ပရိသတ်ကိုစိတ်ကြည်နူးချမ်း မြေ့စေရန်ဟာဒရရွှင်ဆေးများတိုက်ကျွေးခဲ့သူဟာသလူရွှင်တော်ကြီးဦးဧရာကွယ်လွန်ချင်းကြောင့်သူ၏ပရိသတ်များ နှမြောဝမ်းနည်းလျက်ရှိသည်ဟုသိရသည်။ သတင်း&ဓတ်ပုံ- ko nyi